सबै विद्यालय बन्द गर्न सरकारको नि’ र्देशन, यति गते बाट बन्द हुदै विद्यालय? – Paluwa Khabar
सबै विद्यालय बन्द गर्न सरकारको नि’ र्देशन, यति गते बाट बन्द हुदै विद्यालय?
अषोज १२, २०७८ मंगलबार 74
विद्यार्थीहरू ध’ माधम वि’ रामी भए लगत्तै विद्यालय ब’ न्द
दसैं आउन केही दिन मात्र बाँकी छँदा विद्यालय संचालन गरियो । तर धमाधम विद्यार्थी बि’ रामी पर्न थालेपछि फेरी विद्यालय ब’ न्द गर्न थालिएको छ । कुश्मा नगरपालिका(११ पकुवाको सिल्सीमा रहेका दुई विद्यालय ब’ न्द गरिएको छ । स्थानीय विश्वज्योति प्राविधिक तथा व्यावसायिक मावि र रानीस्वाँरा प्रावि ब’ न्द गरिएको हो ।
एक सातादेखि विद्यार्थीमा ज्वरो, रु’ घाकोकी, टाउको दुख्ने, वान्ता हुनेजस्ता लक्षण देखिएपछि विद्यालय ब’ न्द गरिएको विश्वज्योति प्राविधिक तथा व्यावसायिक माविका प्रधानाध्यापक गणेश तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
शुरुमा कक्षा ७ का विद्यार्थी बिरामी परेका थिए । त्यसको एक सातापछि शनिबारदेखि अन्य कक्षाका विद्यार्थीसमेत बि’ रामी परेपछि अनि’ श्चितकालका लागि विद्यालय ब’ न्द गरिएको उनको भनाइ छ । प’ कुवाको रा’ नीस्वाँर क्षेत्रका अ’ धिकांश विद्यार्थी बि’ रामी परेका छन् ।
बालबालिका बि’ रामी पर्न थालेपछि स्थानीय रानीस्वाँर प्रावि पनि ब’ न्द गरिएको छ । शुरुमा बिरामी परेका विद्यार्थी एक सातासम्म पनि निको भइनसकेका र अन्य विद्यार्थी पनि बिरामी पर्ने क्रम बढेपछि विद्यालय ब’ न्द गर्नुको विकल्प नभएको हो । थप विद्यार्थीमा स’ ङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर विद्यालयमा पठनपाठन रोकिएको तिमल्सिनाको भनाइ छ ।
अहिले ५० जना विद्यार्थी बिरामी परेको र उनीहरुको पीसीआर प’ रीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मी बोलाइएको वडाध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलले बताए । भाइरल र कोरोनाको ल’ क्षण उस्तैउस्तै भएकाले थप स’ जगता अपनाउन विद्यार्थीलाई भनिएको छ । उनीहरुले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा स्वास्थ्य प’ रीक्षण गरेर औषधि सेवन गरिरहेको प्राधाध्यापक तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
पर्वतमा यसै सातादेखि भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सञ्चालन गरिएको छ । विद्यालय खुलेको केही दिनमै बि’ रामी परेपछि पढाइ प्र’ भावित बनेको तिमिल्सिनाले बताए ।
Prevबुद्ध एयरको जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए ? यसरी भयो फोटो भाइरल-
Nextपशुपतिनाथ क्षेत्रमा खुकुरी प्रहार, १२ जना नियन्त्रणमा
खुसीको खबर:एसईईको नतिजा आउने मिति तोकियो!